Chichemo che # 1 Nezve Kushambadzira Kunopinda | Martech Zone
Chichemo che # 1 Nezve Kushambadzira Kunopinda
Chishanu, January 15, 2016 Chishanu, January 15, 2016 Douglas Karr
Kamwe chete mwedzi wega wega kana zvakadaro, isu tinonzwa kunyunyuta kumwechete kubva kune vanotarisira vari kushanda nema inbound Marketing agency nevatengi vari kushanda nesu pane kwavo inbound Marketing kuedza. Pasina kutaura kuti kunyunyuta uku ndiko kwandingazviite nesangano redu kana ndisinganzwisise kuti kushambadzira kuri mukati kwakashanda sei.
Chichemo: Hatisi kuwana chero bhizinesi kubva kune yedu webhusaiti.
Pane dambudziko rakakomba muindasitiri yekushambadzira iri mukati mukutsanangurwa kwayakaita uye kushambadzira kuri mukati chaizvoizvo anoshanda. Pfungwa yekuti kumisikidza kuvepo kwewebhu kuchashandura webhusaiti yako kuita injini uko tarisiro mushure mekutarisira inokuwana iwe pakutsvaga kana pasocial, verenga zvinyorwa zvako, uye nekukurumidza zadza fomu pawebhusaiti yako hachisi chokwadi. Zviri kunge kuti inoshanda sei, asi ruzhinji rwebhizinesi harutore iyi nzira.
Ngatikurukurei nezvekutenga maitiro, kutanga. Takanyora nezve micro-nguva uye vatengi nzendo pamberi uye ini ndaikukurudzira kuti uverenge chinyorwa. Icho chokwadi ndechekuti vanhu havakuwane iwe mumhedzisiro yekutsvaga, shanyira peji rako rekumba, uye utenge masevhisi ako neyakareruka. Muchokwadi, iyo data yakapihwa neCisco inoratidza kuti avhareji bhizinesi rine pamusoro penzendo mazana masere (ndapota verenga ebook ratakanyora pane iri).
Kana iwe uri kambani yebasa (senge yedu agency), heino mashandiro erwendo rwekutenga rinowanzo shanda:
Shoko reMuromo - mutengi anowanzo ataura isu kune waanoshanda naye pavanenge vachitsvaga rubatsiro rwatinogona kupa.
kutsvaka - iyo tarisiro inotsvaga online kune rako bhizinesi uye inowana yako webhusaiti uye yemagariro.
Website - tarisiro iyoyo inoshanyira webhusaiti yedu. Vari kutarisa hunyanzvi hupi hwatinahwo, zviwanikwa zvinogona kuvabatsira kuti vatore danho, timu iyo yavanenge vachishanda nayo, uye ndeapi magwaro kana vatengi vatakatoshandira kare.
gutsikana - iyo tarisiro inoverenga zvemukati uye inogona kutotora kana kukumbira rumwe ruzivo.
tevera - tarisiro iyoyo dzimwe nguva inobatana nesu munharaunda, inoona rudzii rwebasa ratiri kuita, inobvunza vanhu padandemutande redu kuti toshanda sei uye uye kana isu togona kubata dambudziko ravo.
Subscribe - kazhinji tarisiro yacho haikwanise kutenga, asi ivo vari kuita ongororo uye nekudaro ivo vanonyorera kune rako tsamba kuti varambe vachikurukura uye kuwana kudyiwa nemazano akakosha.
sangana - tarisiro iyoyo inobatana nesu kuburikidza ne Shoko reMuromo kubatana kuti uwane yako sumo. Mushure mekusangana, vanoona kuti vanovimba kana kwete uye isu totanga kuita bhizinesi.
Kana Kukurukurirana - dzimwe nguva tarisiro inosangana nesu zvakananga kuburikidza neemail kana nhare kumisikidza musangano nesu.
Zvichipa maitiro iwayo, unoona kupi inbound Marketing inokodzera uye chii chiri kunyatso kupa rako bhizinesi? Icho chakasiyana fanera kupfuura izvo zvinowaniswa nzvimbo dzekutengesa dzinowanzo govana, zvinova:
kutsvaka - yenyaya uye tsvaga yako saiti kuverengerwa.
Download - kunyoresa uye kurodha pasi chibvumirano.
pedyo - tora zano uye usaine.
Inbound Kushambadzira ROI
Tichifunga nezverudzi urwu rwehunhu, unoona here kuti zvakaoma sei kupa kushambadzira kwako kwakazara kune ako ese ekutengesa uye ekushambadzira materu? Kana iwe uine timu inobuda yekutengesa, zvinenge zvese kutengeswa zvinofungidzirwa kune iro timu - kunyanya kana ivo vane ruzivo uye vatove nekukurudzira hukama netarisiro iwe yaunoda kuita bhizinesi nayo.
Mibvunzo yekutengesa inbound inoda kusanganisira:
Paunovhara tarisiro, vakaita here shanyira yako saiti mukutengesa kwacho?
Paunovhara tarisiro, vakaita here nyorera tsamba yemashoko?
Paunovhara tarisiro, vakaita here kurodha pasi kana kunyoresa zvemukati?
Paunovhara tarisiro, vakaita here kutsvaka yako online?
Izvo hazvisi zvekuti iwe unogona kuti rese kutengesa kune kwavo kwakawanda kushambadzira kushanya, asi kusafunga kuti haina kukanganisa kune yekutengesa kutenderera imhosva inosuruvarisa. Heano mamwe manhamba kubva kune mumwe wevatengi vedu ari kushamisika:
Aya matanho anonatsa chero bot kana chipoko bot traffic uye inopa gore rinopfuura gore mufananidzo wewebhusaiti yavo analytics. Gore rakapfuura raive newebhusaiti iyo yainonoka uye ichinyatso kuve nezvimwe zvakaputsika zvinhu… zvinosuwisa kune tekinoroji kambani. Ivo vakawanikwa mune gumi nesere dzekutsvaga kunze kwezita ravo rekambani, zvisere zvacho zviri papeji 11. Uye kunyangwe zita ravo rekambani rakange rakasanganiswa nemamwe makambani anonzi mamwe mazita. Iye zvino ivo vanotonga iyo yekutsvaga injini mhedzisiro peji.
Iye zvino Google ine yakazara yakazara kambani inoratidzwa, yavo yemagariro profiles inoratidzwa, uye yakawedzera kambani tsananguro ine sublinks pane yekutsvaga injini mhedzisiro peji. Ivo vanoremekedza makumi mana nematanhatu mazwi akakosha, 406 papeji 21, 1 papeji 38 uye vamwe vese vari kuramba vachiwana traction pavanenge vachivaka chiremera ne organic search.
Uri Kubatsira Sei?
Kushambadzira kwakawanda hakusi nzira yekubvisa bhizinesi.
Vashandi vako vari kusimudzira zvemukati zvako online?
Uri kunyorera rubatsiro rwehukama neruzhinji kusimudzira marongero epamhepo?
Uri kubhadhara kubhadhara kwepamhepo zvirimo here?
Chikwata chako chekutengesa chiri kushandisa zvirimo kubatsira kuvhara tarisiro yavo here?
Chikwata chako chekutengesa chiri kupa mhinduro pane zvemukati zvingabatsira kana zvemukati izvo zvisiri kubatsira?
Ini ndinofunga makambani ari nzungu chaidzo kana aine akawanda evashandi uye hapana ari kusimudzira zvirimo izvo kambani yakaisa mari mairi. Advocacy yakakosha sezvaunoramba uchikura kusvika kwako. Kana ndikaona shamwari kana mumwe wandinoshanda naye achisimudzira bhizinesi rake uye ini ndiri mudanho rekusarudza, ndiri kunyatso tarisa izvo zvavanofanira kupa.
Inbound Kushambadzira haisi sarudzo futi. Isu nguva pfupi yadarika takashanyira netarisiro uyo anga achishambadzira asina webhusaiti kwemakore gumi nemashanu online uye vakandiudza kuti gore rega rega mutengo pamutobvu unokwira uye yavo padyo mwero inoramba ichidonha. Vanhu vanozeza kuita bhizinesi navo nekuti ivo havana hupo hwewebhu. Iye zvino vari kutibvunza isu kuti vanogona sei gadzirisa yeaya akarasika makore avasina kuisa mari. Vati ivo vari kurohwa nevanokwikwidza vane iwo makuru masayiti, kutonga mitsva yekutsvaga, uye vari kuita pasocial media.
Mhinduro pfupi: Havagone kukwikwidza izvozvi.
Asi ivo vanogona kuisa mari mukushambadzira inbound izvozvi izvo zvinounza simba, ngavachivhare zvimwe zvekutengesa izvozvi zvine chiremera zvemukati, uye varambe vachiendesa kutarisisa nekuziva kune yavo brand online Chokwadi, zvinotungamira zvinotungamira zvinouya kuburikidza pakutanga, asi nekufamba kwenguva vanozovhara akawanda anotungamira, vatore nguva shoma, uye chengetedza toni yemari.
Haisisiri nharo yekuti kana kwete inbound Marketing anoshanda. Yese kambani hombe iri kuisa mari yakawanda uye zvirimo mune zvavo zvemukati, zvekutsvaga uye zvemagariro mazano pavanoramba vachiona kudzoka kwekudyara. Iyo nharo ndeyekuti iwe unoyera sei uye unoti kudzoka pane iyo investa.
Kana iwe wakadyara mune inbound Marketing uye urikuona kusatungamira kwekutungamira kana yakashata mhando inotungamira, urikuteerera kune rumwe ruzivo
Mangani tarisiro ari kushanyira yako saiti kubva pakuita yako inbound kushambadzira zano?
Mangani tarisiro yakanyorerwa tsamba yako kubva pakuita yako inbound kushambadzira zano?
Mangani tarisiro kurodha pasi kana kunyoreswa zvemukati kubvira pawakaisa yako inbound kushambadzira zano?
Mangani tarisiro tsvaga yako yepamhepo kubvira pawakaisa yako inbound kushambadzira zano?
Yakakura sei yako kutengesa kunovhara kubva pakuita yako inbound kushambadzira zano?
Yako yakareba sei kutengesa kutenderera kubva pakuita yako inbound kushambadzira zano?
Inbound kushambadzira iri kuve nekuratidzira kukanganisa kune kwese kutengesa uye kushambadzira kwekambani yega yega kumabhizimusi ese. Asi haishande muvhavha, inoshanda pamwe neyako inobuda uye kumwe kwekutengesa uye nzira dzekutengesa. Kuti uwedzere ROI, iwe unofanirwa kuve wakazvipira uye unoshanda kuti uve nechokwadi chekuti urikuvaka simba uye chiremera muindastiri yako. Kukura kuverenga kwako, kukura netiweki yako, kukura uye kugovana nehukama hwako zvinotevera… zvese izvi zvinotora inoshamisa nguva uye nesimba.
Ini handisi kutengesa chirongwa chandisingatendi mazviri. Ndiri kutengesa sisitimu iyo yawedzera kwedu kusvika uye mari nesangano redu kwemakore manomwe yakatwasuka. Uye isu takaita zvakafanana kumakumi emakambani ekutengesa uye tekinoroji. Ivo vanokoshesa kukosha uye kushandira kwenguva refu vanonyatsoziva mhedzisiro.
Indasitiri yedu (inosanganisira yedu agency) inoda kuita basa riri nani rekudzidzisa vatengi uye nekupa ese manhamba anopa kuti inbound investing ndiyo yakanakisa kudyara iyo mutengi anogona kuita mukushambadzira kwavo kuyedza.
Tags: inboundinbound inotungamirainbound Marketingzvinoisa
Nzira ina dzekuti Big Data Zvikumbiro Zviri Kupa Zvabuda